BUDDHIST TERMS' Dictionary: FACULTY OF VITALITY - ဇီဝိတိနြ္ဒိယ
FACULTY OF VITALITY - ဇီဝိတိနြ္ဒိယ
FACULTY OF VITALITY Jivitindriya
ဇီဝိတိနြ္ဒိယ - ဇီဝိတိနြေ္ဒ၊ အတူဖြစ်ဖက် ရုပ်နာမ်တရားကို အသက်ရှည်ကြာ တည်တံ့အောင် စောင့်ရှောက်ရာ၌ အစိုးတရရှိသောတရား။
ဇီဝိတိနြေ္ဒသည် ရုပ်ဇီဝိတိနြေ္ဒ၊ နာမ်ဇီဝိတိနြေ္ဒဟူ၌ ၂-မျိုးရှိသည်။ ရုပ်ဇီဝိတိနြေ္ဒသည် အတူဖြစ်ဖက် ရုပ်တရားတို့ကို အသက်ရှည်အောင် စောင့်ရှောက်ရာ၌ အစိုးတရရှိသည်။ နာမ်ဇီဝိတိနြေ္ဒသည် အတူဖြစ်ဖက် နာမ်တရားတို့ကို အသက်ရှည်အောင် စောင့်ရှောက်ရာ၌ အစိုးတရရှိသည်။
Those mental and physical phenomenon that keep the co-arising mental and physical phenomena functioning (i.e. keeping them alive) are called Faculty of Vitality.
The physical faculty of vitality keeps the co-arising physical phenomena functioning (i.e. sustain them).
The mental faculty of vitality keeps the co-arising mental phenomena functioning (i.e. sustain them).